Breaking News: Ugandha oo ka digtey weeraro qarax oo laga fuliyo wadankaasi – SBC
Breaking News: Ugandha oo ka digtey weeraro qarax oo laga fuliyo wadankaasi
Taliska ciidamada Booliiska wadanka Uganda ayaa soo saarey digniin weeraro qaraxyo oo laga fuliyo wadankaasi kuwaasi oo lagu soo beegayo sanad guurada 1-aad ee ka soo wareegtey markii qarax bam oo uu fuliyey qof natiisa hurey uu diley 76 qof oo daawanayey ciyaar kubada cagta ah oo ka mid aheyd koobkii aduunka.
Haweeney afhayeen ah oo u hadashay Booliiska wadanka Ugandha oo lagu magacaabo Judith Nabakooba ayaa sheegtey inay ka warheleen weeraro ay ku sheegtey inay yihiin kuwa argagixiso oo xarakada Al-Shabaab ay ka fuliso wadanka Ugandha.
“Waxaynu helnay ilo wareed oo muujinaya in ay dhici karaan weeraro argagixiso oo laga shaki qabo inay geystaan kooxda Al-Shabaab, waxaana weeraradu qorsheysan yihiin inay dhacaan Khamiistan ilaa khamiista dambe inta u dhaxeysa, waxaana ugu baaqaynaa dadka shacabka ah inay taxadar muujiyaan.
Taliska Booliiska Uganda ayaa sheegay inay qaadi doonaan hawlgalo dheeraad ah oo ku aadan xaqiijinta amaanka dadweynaha & waliba xarumaha dawlada ee magaalooyinka waa weyn. Video hoose ka daawo weerarkii qarax ee dhimashada dhaliyey ee ka dhacay Kampala July 2010
Weerarkii ka dhacay bishii July magaalada Kampala ee ay ku qurbaxeen 76 qof waxaa masuuliyadiisa sheegtey xarakada Al-Shabaab oo ku tilmaamay weerarkaasi mid ay ugu aargudayeen dadkii ku dhintey duqeynta ciidamada AMISOM ay ka geysteen magaalada Muqdisho gaar ahaan Suuqa Bakaaraha.
Ugandha waxaa ka jooga magaalada Muqdisho ciidamo kumaan kun oo qayb ka ah hawlgalka midowga Afrika ee lagu magacaabo AMISOM, waxay kaloo Ugandha haatan lug weyn ku leedahay xaaaldaha siyaasadeed ee Soomaaliya.